Sary hosodoko kilasika 10 izay hahatonga anao hangovitra | Famoronana an-tserasera
Ao amin'ny tontolon'ny sary dia nisy fomba maro samihafa nitondrana ny fampihorohoroana, horohoro (izay tsy mitovy) sy ireo hevitra maizina indrindra azo ampiorina ao an-tsain'ny olombelona. Ny fahatahorana ny fahafatesana sy ny zava-miafina ny tsy fantatra dia nahatonga ireo mpanakanto tamin'ny tantara manerantany hisolo tena ireto sary ireto amin'ny fahadiovana genius.
Amin'ity lahatsoratra ity dia te-hiverina amin'ny lasa aho ary hijery ny sasany amin'ireo sanganasa tena marina teo amin'ny tantaran'ny hosodoko. Compositions izay voamarika a aloha sy aoriana ary tsy namela olona tsy hiraharaha izy ireo.
Dante sy Virgil any amin'ny helo fisehoana somary mahaliana izany. Ny mety hiseho amintsika ho sehatra firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy dia tena ady an-keriny eo amin'ny fanahy roa eo imason'ny devoly mihitsy. Hyperrealism dia miavaka amin'ny fitsaboana ny habetsahan'ny toetrany, ny refy ary ny rafitra anatomika. William-Adolphe Bouguereau dia namorona an'ity sary ity tamin'ny taona 1850.
sary hosodoko hosodoko hosodoko hosodoko hosodoko hosodoko hosodoko hosodoko kilasika hosodoko hosodoko kilasika hosodoko kilasika
Ity sary ity (ilay faritra nahasarika ny saiko indrindra) dia sombin'ny sombin-telo izay nantsoina hoe Ny sahan'ny fahafinaretana eto an-tanyavy amin'i El Bosco. Na dia maneho ny lanitra sy ny tontolon'ny tany koa aza ny asa manontolo, dia tsy maintsy holazaina fa tena marary, mahery setra ny helo atolotry ny goavambe Hieronymus Bosch amintsika. Manasongadina toetra amam-panahy misy lohan'ny vorona mpihaza mipetraka eo amin'ny fidiovana, ary misy vilany eo an-dohany. Heverina fa mety ho lanin'i satana ny olona voaheloka ary ny fandroahana azy ireo ao anaty cesspool izay misy olona hafa mandoa fahalotoana na volamena madiodio, ity farany angamba ho fiheverana ny fitiavam-bola. Eo ambanin'ny lamban'i satana, ny vehivavy mitanjaka dia terena hijerena ny tenany amin'ny fitaratra mifono apetraka eo amin'ny vodin'ny demonia, izay manondro ny fahotan'ny avonavona.
Saturnus mitelina zazalahy iray Iray amin'ireo sary hosodoko angano nataon'i Francisco de Goya. Ny mpanoratra dia manolotra antsika raim-pianakaviana miaraka amin'ny fijerin'ny hadalana. Mandratra ny fatin-janaky ny zanany lahy amin'ny fandatsahan-dra izy amin'ny toerana tsy misy alokaloka. Io no iray amin'ireo asa be fanontaniana indrindra. Ny kanibalism dia mety ho taratry ny alahelo sy ny filan'ny fandringanana izay misy tsy tapaka ao amin'ny sary hosodoko mainty.
Ny horohoro, ny satanisma ary ny erotisma dia mety ho ireo teny izay mamaritra tsara ny mpanoratra Johann Heinrich Füssli, mpanao hosodoko soisa izay nametraka fironana nandritra ny taonjato faha-XNUMX. Ity asa ity dia mitondra ny lohateny hoe Ny nofy ratsy, ary aingam-panahy avy amin'ny nofin'i Giulio Romano momba ny Hecuba. Ao amin'ny sehatra misy zazavavy matory, dia azon'ny incubus izy, karazana demonia izay miseho amin'ny nofinofy erotika. Na dia tsy hiteraka tahotra be loatra aza ankehitriny, ny marina dia tamin'io fotoana io dia niteraka fanehoan-kevitra mahery vaika teo amin'ny mpihaino azy. Indrindra fa noho ny endrik'ilay soavaly hita eo afara, mandinika ilay sehatra amin'ny rivotra matoatoa.
Ny lohahevitry ny Judith notapahin-doha Holofernes Izy io dia iray amin'ireo fizarana ao amin'ny Testamenta Taloha izay naseho matetika teo amin'ny tantaran'ny zavakanto, na izany aza, dia avy amin'ny tanan'i Artemisia jentilisa izay ahazoany hery sy fanehoan-kevitra bebe kokoa. Ilay mahery fo ao amin'ny Baiboly, miaraka amin'ny ankizivaviny, dia niditra tao amin'ny tobin'ny fahavalo, nanintona ary nanapaka ny lohany Holofernes, ny jeneraly fahavalo. Amin'ny asa no aseho ny fihetsika mahery setra indrindra ary tsy misy karazana sivana na fady. Ny rà mandriaka no tena mampiavaka ny fitsaboana ra tena azy.
Ilay hala mitsiky Iray amin'ireo sary hoso-doko ireo izay manaitra ny ahiahy sasany nefa tsy fantany ny antony. Ny fijeriny very dia manaitra, tena tsy fantatsika hoe aiza ny endrik'io endrika io, ny fantany ihany fa mitsiky amin'ny fomba mistery izy. Ny mpanoratra, Odilon Redon, dia niavaka tamin'ny fikatsahana ny mitovy amin'ny fihetsem-po ateraky ny zavatra niainana namboarina tamina zavatra iray, tamin'ny sary. Ny sanganasany dia nifantoka hatrany tamin'ny foto-kevitry ny maizina sy ny mistery. Miaraka amin'ity mpanoratra ity, ny tandindona dia nanjary fitaovana mahery vaika indrindra amin'ny fifandraisana sy ny fiara hihoarana ny fitaovana, mahatratra ny refin'ny tontolon-materialy hafa, tsy fahita firy ary vahiny amin'ny zanak'olombelona.
Ny mpanoratra an'ity sanganasa ity (Fizarana anatomika), Théodore Géricault, dia nahazo taolam-paty avy amin'ny tranom-paty noho ny fangatahana afaka nandoko azy ireo. Sary hoso-doko somary mamontsina izay nanaitra ny sain'ny olona sy ny fahalianany ho an'ny daholobe, noho ny fahatahorana ny fahafatesana mihitsy. Matahotra isika fa ny vatantsika indray andro any dia ho lo ny lo sy hanadino ny tenany, dia manandrana tsy miresaka momba ny lohahevitry ny fahafatesana isika, rehefa lasa lohahevitra fady izany. Tsy afaka miresaka momba izany isika, fa miaraka amin'izay dia saika ilaina amin'ny ilaina izany.
Fandripahana ny tsy manan-tsiny, dia sary hosodoko nataon'i Peter Paul Rubens izay niavaka noho ny fanaovana herisetra izaitsizy ka hatramin'ny fandikana ny fahatsapantsika tena. Sehatra mahatsiravina no aseho amin'ity sary ity. Ankizy am-polony maro no alaina amin'ny sandrin-dreniny ary hatsipy amin'ny tany. Ny fitsaboana anatomika sy fitambarana dia mahatalanjona ary ny tanjona mihoatra ny fanatrarana. Tsy azo atao mihitsy ny tsy mahatsiaro ho tsy afa-manoatra na mampihorohoro rehefa misaintsaina ilay fitambarana.
Niantso ity asa ity Lehilahy antitra roa mihinana lasopy, anisan'ny andian-doko mainty nataon'i Francisco de Goya. Lehilahy antitra roa no miseho eo amin'ilay sehatra, izay tsy hainay mazava tsara raha lehilahy na vehivavy. Ilay eo ankavia manana lamba fotsy ary toa tsy misy nify. Mangatsiatsiaka ilay eo ankavanana: manana endrika tsy miovaova tanteraka izy, mason-koditra roa ny masony ary toy ny karan-doha tanteraka ny volon'ny tarehiny.
Fanambarana nataon'ny mpanakanto angano Edvard Munch, fiaviana norveziana. Amin'ny asany Ilay hiaka Manome antsika endrika androgynous isika (tsy azontsika lazaina raha lehilahy na vehivavy izy) ary manana fihetsika feno tahotra lalina, na dia tototry ny ranomasina mangatsiaka sy mafana aza, karazana korontana sy korontana kely toa hanodidina ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary hosodoko kilasika 10 izay hahatonga anao hitebiteby
nekane96 dia hoy izy:
Ny fako dia tsy misy amin'ny fiteny espaniola. Ny teny tadiavinao dia mivoaka.
Valiny amin'ny nekane96
Ada dia hoy izy:
Tsy misy hevitra, tompoko tonga lafatra
Valio ny ADA